လီရနာ ဂင်္ဂါ ဧရာတီ ...တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်
ကံ့ကော်၀တ်ရည်စာပေ၊ ဧပြီလ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ ပထမအကြိမ်။
အုပ်ရေ .....= ၅၀၀
တန်ဖိုး ......= ၁၃၀၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ ..= ၇၀၀
ပန်းချီ .......= မြင့်မောင်ကျော်
ထုတ်ဝေသူ = ဦးကျော်ဇင် ၊ ကံ့ကော်၀တ်ရည်စာပေ ၊ ၅၁ ရေကျော်လမ်း ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
လီရနာ ဂင်္ဂါ ဧရာ၀တီ က ဗျာ ၏ သ င်္ခါ ရ နှ င့် နိ ယာ မ များ
..........ဒီစာအုပ်လေးကို ကံ့ကော်၀တ်ရည်စာပေ က ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရခဲ့တာပါ။ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိသလို အတ်ိုင်းမသိ ၀မ်းသာ မိတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးက ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်းမှာ ၁၁ နှစ်က ကျော် လုံးလုံး ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်ပါ။
..........စာအုပ်ကို စ..ဖတ်တယ်ဆို ကျွန်တော် အရမ်းကိုအံ့သြနေမိတယ်။ အခြားအကြောင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်အကြောင်းကို ရေးသားထားတာ ခုမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖတ်မိလို့ပါ။ ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် က အသက် ၈ နှစ်သားထဲက ဒဂုန်မောင်ဖေသိန်း အမည်ဖြင့် ၀တ္ထုတွေ ရေးသားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ၁၉နှစ်သားနဲ့ ရူမ၀မဂ္ဂဇင်းမှာ ဒွိဟ ကဗျာ ဖြင့်စာပေနယ်သို့ ရောက်ကာ စာပေများ ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆရာတစ်ဦးပါ။
........ဆရာအကြောင်းကို တချို့ပြောပြ ပြီးပြီမို့ စာအုပ်အကြောင်းလေးကို အကျဉ်းပြောပြပါရစေဗျာ။ ကဗျာ ဆိုတဲ့ရသဘော....ခံစားမှု့ သက်၀င်မှု့ နက်ရိုင်းမှု့ တွေကို ရှင်းပြပေးရုံက ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အနှစ်သာရကို ဆရာက သဘောပေါက် နားလည်လာအောင် ဆရာက ရေးသားရှင်းပြ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
.........ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ စကားတန်ဆာဆန်ပုံတွေ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ မာယာတွေ...သက်၀င်အောင် ဆရာက ဥပမာတွေ နဲ့ ရေးသား ရှင်းပြထားတယ်။ အရင်တုန်းက မြန်မာကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ ကဗျာတွေကို ရေးသားဖော်ပြကာ အနက်အဓိပ္ပါယ်နဲ့ စကားတန်ဆာဆင်ပုံ ကဗျာရဲ့ မာယာတွေကို ဆရာက စာဖတ်သူတွေ နားလည်လာအောင် ရေးသားထားပုံက အရမ်းကို ထိထိမိမိရှိပါတယ်။
........နိုင်ငံခြားကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့ ကဗျာတွေကိုလဲ ဆရာက ဖွဲ့နွဲ့ထားပုံတွေ ကို ရေးသားဖော်ပြကာ ရှင်းပြတယ်။ တကယ်တော့ ဆရာပေးခြင်တဲ့ အရာ က ..ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့
- လတ်ဆတ် လန်းဆန်းမှု့တွေ
- ပွန်းရှ ညှိုးနွမ်းမှု့တွေ
- ရိုးအီသွားတဲ့ သဘောတရားတွေ
.........ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အသက်သွင်းပုံ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အရေးပါပုံတွေ ကဗျာရဲ့သဘောတရားတွေကို ရေးသားဖော်ပြပေးထားတယ်။ အခု စာဖတ်နေများ ၊ စာပေမြတ်နိုးတက်သူများ ၊ ကဗျာကို ခွဲခြားမခံစားတက်သုများ ဒီစာအုပ်လေးကို. ဖတ်ကြည့်ပါ..။
ရှင်းပြဖို့ မလိုအောင် ကဗျာတစ်ပုဒ် ကို မြတ်နိုးလာလိမ့်မယ် ။
ရှင်းပြဖို့ မလိုအောင် ကဗျာတစ်ပုဒ် အကြောင်းကို နားလည်တက်လာမယ်။
ရှင်းပြဖို့ မလိုအောင် ကဗျာတစ်ပုဒ် ကို ခံစားတက်လာလိမ့်မယ်..လို့..ကျွန်တော် ရဲရဲကြီး အာမခံရဲတယ်။
.......ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆရာရေးသား ဆွေးနွေးဖော်ပြပေးတာ..
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ပကတိဖြစ်တည်နေမှု့
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အမှန်တရား
- ကဗျာသစ္စာတို့ရဲ့ သိမ်မွှေ့ဆက်ဆံမှု့
- ရှု့တက်သော ကဗျာဆရာတို့ရဲ့ ရှု့အပ်သော
.......ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ ပက်သက်လာရင် ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားထဲက ကဗျာဆန်မှု့လေတွေ ၊ လက်တွေ့နဲ့ ကွာဟမှု့လေးတွေကို ဥပမာပေးကာ ကဗျာ ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးလက်ခံတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက်တွေ ကို နား၀င်ချိုပုံလေးတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ် ရေးပြထားတယ်။
.......ဆရာရေးသားဖော်ပြပေးထားတဲ့အထဲမှာ ကဗျာဆိုတာ ..
- ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကလဲ ရှိသည်။
- အခုလဲ ရှိသည်။
- ကမ္ဘာ၏ ရှေ့ဖျားတွင်လဲ ရှိသည်။
- အနောက်ဖျားတွင်လဲ ရှိသည်။
- တောင်ဖျားတွင်လဲ ရှိသည်။
- မြောက်ဖျားတွင်လဲ ရှိသည်။
- ခြားနာသော ယဉ်ကျေးမှု များရှိသည်။ သိုရာတွင် ယဉ်ကျေးမှု့များ၌ မခြာမနားတူညီစွာ ကဗျာတွေ ရှိကြသည်။
- အချိန် ခြားနားမှု့
- နေရာ ခြားနားမှု့
- ယဉ်ကျေးမှု့ ခြားနားမှု့ ခြားနားမှု့
ဤ ခြားနားမှု့တွေကို ပမာမပြုပဲ မခြားမနား တူညီသော စကား တန်ဆာဆင် မှု့တွေလဲ ရှိနေသည်။
ဒီစာပိုဒ်လေးက အခန်း (၁၂) စာမျက်နှာ (၇၃) က တစ်စိတ်တစ်ဒေသ စာလေးကို စာဖတ်သူများ သိစေလို၍ ရေးသားဖော်ပြပေးချင်းပါ။
.........ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်က ကဗျာကို ကဗျာဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ စကားလုံးတွေ...ပုံရိပ်တွေ...ရှိပြီးသား စကားလုံးတွေ ပုံရိပ်တွေကို ယခင်အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းမသုံးဘဲ အဓိပ္ပာယ်သစ်ပေါ်ထွက်လာအောင် သုံးပုံတွေ..ကို...
- ကဗျာကို မြတ်နိုးသူတွေ
- ကဗျာကို လေ့လာနေသူတွေ
- ကဗျာကို နားမလည်သေးတဲ့သူတွေ
- ကဗျာကို စိတ်၀င်စား သူတွေ အတွက် ဆရာက လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပါတယ်။ နောင်လာနောင်သား တွေကို ဆရာပေးနိုင်သလောက် ပေးခဲ့တဲ့ ရှင်းပြနိုင်သလောက် စာဖတ်သူတွေ ကို တန်ဖိုးထားပြီး မေတ္တာနဲ့ ရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ဆို ပိုပြီး မှန်ပါလိမ့်မယ်။ဆရာဘုန်းနိုင်က ပြောခဲ့ပါ သေးတယ်။ ကဗျာကို နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါ လေးနက်ကြောင်း ပို ပိုသိလာတာကလွဲလို့ ကုန်စင်အောင် နားမလည်သေးပါဘူး...လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
..........ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်သူတိုင်း ဝေဖန်လို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လေးလို့မေးရင် ကျွန်တော်မှာ တိကြတဲ့အဖြေရှိ ပါတယ်.....
- ကန္တ၀င် ကဗျာ ဆိုတာ ...ဘယ်လိုမျိုးလဲ ..?
- မော်ဒန် ကဗျာ ဆိုတာ....ဘယ်လိုမျိုးလဲ...?
- ကဗျာသစ္စာက ..ဆိုတာ ဘာတွေလဲ....?
- ကဗျာ၏ ဗျာပါရ...ဆိုတာ ဘာတွေလဲ..?
- ကဗျာ၏ ဗျာပါရဏ..ဆိုတာ ဘာတွေလဲ..?
........အကျယ်တပွင့် ဥပမာပေးကာ ရှင်းပြ ဆွေးနွေးပြ ရေးသားဖော်ပြပေးကာ..ကဗျာတစ်ပုဒ် ရွတ်ဖတ်ပြရာတွင်လဲ.......အသံသည် ခံစားမှု့အလိုက်..
.........အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာက စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ ရေးသား ဖော်ပြ ပေးထားတဲ့အပြင်.....
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ စကားလုံးပုံရိပ့်တွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ စကားလုံးတန်ဆာဆန်ပုံတွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ မာယာတွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အကြောင်းအဆတ်တွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အနွယ်အမြစ်တွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အခြေခံ အရိုးအညှာတွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အမာခံ အနှစ်သာရတွေ
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အားသာချက်
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အားနည်းချက်
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဆန်းသစ်ခြင်း
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ မဆန်းသစ်ခြင်း
- ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ တီထွင်မှု့ စစ်စစ်တွေကို
ဆရာက လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးတယ်။
`` ဝေဖန်လို့မရအောင် စာအုပ်လေးက ကောင်းနေလို့ပါပဲ´´
.......``လီရနာ ဂင်္ဂါ ဧရာ၀တီ ´´စာအုပ်အကြောင်းပြောပြရရင် ကုန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂အနှစ်ထိ ၁၁ နှစ်ကျော် ကာလ ရေးသားထားတဲ့ တန်းဖိုးရှိလှတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ဖြစ်သလို ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးဆိုလဲမမှားနိုင်ပါဘူး။ ဆရာကို အရင်ထဲက လေးစားပြီးသားပါ ။ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ပြီးမှ ပိုပြီးလေးစားမိသလို ပိုပြီးတန်ဖိုးထား တက်လာတယ်။ ဒီမျှပင်မဟုတ်ပါ ကဗျာရဲ့ စီးဆင်းနေတဲ့ အသက်သွေးကြောကိုပါ တန်ဖိုးထား အလေးအနက် ထားတက်လာမှာ မလွဲမသွေပါ။
ပထမဆုံး ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် နှင်တကွ ယခုစာဖတ်နေသူများကို တောင်းပန်ချင်တယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတို့သည် စာအုပ်ထဲပါရှိတဲ့ ၁% မျှသာပါ။ စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆရာအရေးအသားကို ချီးမွမ်း ခန်းဖွင့်ရတာ (မြင်းထိန်းက ယောအတွင်း၀န် ဦးဖိုးလှိုင် ကို ချီးမွမ်း သလိုဖြစ်နေပါပြီ)``လီရနာ ဂင်္ဂါ ဧရာ၀တီ´´ စာအုပ်က စာမျက်နှာ ၇၀၀ ပါရှိပါတယ်။ ဆရာရဲ့ လက်ကျန်အချိန်ကာလ ၁၁နှစ်ကျော်ကျော် နောက်ဆုံး ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ၁လ လောက်နဲ့ အပြီးဖတ်မိတယ်။ ဆရာပေးချင်တဲ့ မတ်စ်ဆေ့ ၁၀၀%မှာ ၁၀% ကို မရေမရာပဲမှတ်သားမိတယ်။ တချို့ဆို ကိုယ့် ထပ်ပြီးလေ့လာရမဲ့ အချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ ၁လနဲ့ အပြီးဖတ်တာ မြန်လွန်းပါတယ်။ ဆရာကို လေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် နောက်ထပ်ကြိမ်
အကြိမ်ကြိမ် ထပ်ပြီး သေသေခြာခြာ စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ပါဦးမည်။.။
လိုအပ်ချက်များကို မေတ္တာဖြင့် ဖြည့်စွတ်ဖတ်ပေးပါနော်။
Book Review by Tun Tun NaingNaing